Mihatakataka fa olon-dehibe ? • AoRaha
Tao anatin’ny taona vitsy izao no efa nahabe resaka teto amin’ny firenena ny raharaha famoahana fahazoan-dalana mamily fiara, amin’ny alalan’ny karatra biometrika hosoka, izay nivoaka tetsy amin’ny Ivon-toerana fanomezan-daharan’ny fiarakodia sady famoahana fahazoan-dalana mamily ary ny taratasin’ny fiara (Cim) Ambohidahy. Nisy ireo tompon’andraikitra voalohany voatonontonona mivantana tamin’ny famitahana ankitsirano ny vahoaka malagasy saingy hatramin’izao, toa vitavita ho azy ny raharaha.
Hatreto, tsy misy ny fisokafan’ny famotorana lalina mahakasika io tranga io. Tsy misy akory na dia ny fakàna am-bavany an’io olona voatondro molotra io aza. Niharihary tahaka ny vay an-kandrina anefa ny famoretana ny vahoaka amin’ny tsy maintsy hanarahana izay baiko nomeny, kanjo fitaka bevava sy kolikoly nentina nambotriana ny mpiray tanindrazana fotsiny no betsaka. Ankehitriny, afaka mihatakataka izy fa olon-dehibe, angamba!?
Amin’izao fotoana, mbola voasaringotra amin’io raharaha kolikoly teo anivon’ny Cim, io ihany koa ny mpiasa miisa enina ambin’ny folo miaraka amin’ny lehibeny. Ity farany izay efa nohenoina teny anivon’ny Fitsarana niaraka tamin’ny miaramila iray sy ny vadiny ary voalaza fa mbola araha-maso hatramin’izao. Midika izany, fa isan’ny sampandraharaha tsy dia nadio loatra ary tena nanjakan’ny kolikoly ity ivon-toerana misahana ny fanomezan-daharana ny fiara eny Ambohidahy ity.
Mila diovina, araka izany, io sampandraharaha io, mialoha ny tena hamoahana indray ny karatra vaovao, izay efa nampanantenain’ny minisiteran’ny Atitaty fa hivoaka afaka andro vitsivitsy. Mila ovaina ihany koa ny fomba fiasa hisorohana ny kolikoly, satria izany indrindra no isan’ny manome vahana ny halatra fiara eto amintsika. Misy hatrany mantsy ireo mpanadio izany ao anatiny ao. Inona moa fa tsy mitovy amin’ny famotsiana omby halatra ihany koa e!
Fiofanana any ivelany